Miady ho antsika any an-danitra izy rehefa manota isika
"Anaka, izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota, dia manana Solovava ao amin'ny Ray isika, dia Jesôsy Kristy, Ilay Marina" - 1 Jao. 2:1
Noho ny tendriny manokana no nametrahan'Andriamanitra Solovava mitafy ny maha-olombelona teo amin'ny alitarany. Ny hampahafantatra antsika eo anatrehan'ny Ray amin'ny maha-zanany antsika no asan'i Kristy, amin'ny maha-Mpanalalana antsika Azy.
Nianiana ny hisolo toerana antsika sy ho antoka ho antsika i Kristy, ary tsy manavaka na iza na iza Izy. Loharanom-pankatoavana tsy mety ritra ho antsika ny fankatoavany. Ny fahamendrehany sy ny fanetren-tenany ary ny fandavan-tenany dia raisina ho fofona manitra izay asandratra miaraka amin'ny vavaka ataon'ireo mpanara-dia Azy. Raha miakatra any amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny fivavaky ny mpanota atao amin'ny fo sy amim-panetren-tena, i Kristy kosa mampifangaro izany amin'ny fahamendrehany sy ny fankatoavany tanteraka. Izany no manome hanitra ny vavaka ataontsika. I Kristy no efa nianiana fa ho mpanalalana ho antsika, ary ny Ray dia mihaino mandrakariva ny Zanaka.
Izao no zava-miafin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia ny nandraisan'i Kristy ny maha-olombelona, ka hanandratany ny olona hahatratra ny fenitra ara-moralin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainam-pietrena. Entiny eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ilay toetr'olombelona noraisiny, ary eo no anolorany eo anatrehan'ny Ray ireo zanany, satria ny voninahitra nomeny azy ireo dia mihoatra noho izay omena ny anjely. Izany rehetra izany no zava-mahagaga eo imason'ny lanitra manontolo, ary zava-miafina izay tian'ny anjely dinihina. Izany no fitiavana izay mampilefitra ny fon'ny mpanota. — Ms, 21, 1900
Tsy vitan'i Kristy ny nijery ny taranak'olombelona tandindomim-paharinganana, ka nafoiny ny ainy mba hamonjena azy ireo ho afaka amin'ny fahaverezana mandrakizay. Noho izany, hijery amim-pangorahana sy amim-pamindrampo ny fanahy rehetra izay miaiky fa tsy mahavonjy ny tenany Izy.
I Kristy no Mpisolovava antsika. Fikiro ny tanan'i Kristy ary hazony mafy, ao anatin'ny fanekena tanteraka sy amin'ny fo tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Azony atao ny mihazona mafy kokoa ny tananao noho ny ihazonanao ny tanany.